Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: ကျုပ်ထက်ငယ်တဲ့သူတွေကိုပြောချင်တာပါ
အေး ..မင်းတို.တွေငါ့ထက်ပညာတတ်ကြပါတယ် ...
“အရင်းမစိုက် လှေထိုးလိုက် ..”
“လွှတိုက်.. လှေထိုး..လူမိုက်အားကိုး ..”
" Big Brother Policy" ...ဆိုတာမျိုးလို ...
ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက် နာထောင်ပါ ...
“ချီဂွေးဗားရား”ရဲ.အကြောင်းကို မင်းတို.သိပေမယ့် ...
“စောဘဦးကြီး ”အကြောင်း မင်းတို.မသိကြတာ ...
“နိုင်ရွှေကျင်” အကြောင်း မင်းတို.မသိကြတာ ...
အရမ်းဝမ်းနည်းဖို. ကောင်းလို.ပြောပြတာပါ ...
“စောဘဦးကြီး” ဆိုတာ ...
Cambridge မှာစာသင်ခဲ့တဲ့ ရှေ.နေ ...
နေမဝင်အင်ပါယာ ရဲ.တရားရုံအားလုံးမှာ ...
ရှေ.နေလိုက်ခွင့် ရှိတဲ့သူ ...
“နိုင်ရွေကျင်” ဆိုတာ ...
Royal Navy ရဲ.စစ်သား(အရာရှိ)
Royal Navy တွေ ဘယ်လိုစည်းကမ်းရှိ လည်းဆိုတာ ...
ရှေ.လူကြီးတွေ မေးကြည့်ကြပါ ...
နောက်ငါတွေ.ခဲ့တာ တစ်ယောက်ရှိတယ် ...
ငါသူငယ်ချင်ရဲ. အဖေပဲ ...
သူဘယ်လို.နေခဲ့လည်း ဆိုတာငါသိတယ် ...
နိုင်ငံရေးဆိုတာကို ..ငတ်လို.လုပ်သူတွေ မဟုတ် ...
ယုံကြည်မှုနဲ. လုပ်ခဲ့ကြတာ ...လုပ်နေကြတာ ...
ငါတို.မြေရဲ. “ချီဂွေဗားရား” တွေကို ...